धनकुटामा ५० घरपरिवारलाई जस्तापाता |
धनकुटामा ५० घरपरिवारलाई जस्तापाता
मलाती मोक्तान संवाददाता
Monday, September 30, 2019 । धनकुटा
धनकुटा पाख्रिबास नगरपालिकाले शनिबार सुरक्षित नागरिक गरिबीनीवारण जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं. ६, ७ र ८ का ५० घरपरिवारलाई जस्तापाता वितरण गरेको छ ।
धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद राजेन्द्र कुमार राईले जस्तापाता हस्तान्तरण गर्दै दशैं, तिहार, छठ् र उभौलि पर्वको शुभकामना दिएका थिए । सांसद राईले कार्यक्रममा खानादेखि छाना लगायत सम्पूर्ण जनताका आवश्यकता सरकारले पुरा गर्ने बताए ।
नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका गरिब, विपन्न, एकल महिला, दलित र पिछडिएका घरपरिवार छनोट गरेर १४ लाख बराबरको जस्तापाता वितरण गरिएको नगरसभा सदस्य सरोज राईले जानकारी दिए । उनले अन्य वडाहरुमा मंसिरपछि जस्तापाता वितरण गरिने र नगरभित्र रहेका गरिब पहिचानका लागि गणना कार्य सञ्चालन भइरहेको बताए ।
पाख्रिबास नगरपालिका भित्रका नागरिकले जस्तापाता पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला विकास समन्वय समिति धनकुटाका संयोजक टङ्क चहवान, नगर प्रमुख विर्षबहादुर राई वडाका जनप्रतिनिधि लगायत उपस्थित रहेका थिए ।
कार्यक्रम पाख्रिबास नगरपालिकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष शान्तिराम गौतमकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न भएकाे थियाे ।
छथरजोरपाटीमा काममा आधारित राहत प्याकेज
खोटाङमा स्थानीयवासीले राखे वडाध्यक्षलाई क्वारेन्टिनमा
दिप्रुङ चुईचुम्माका २५३ परिवारलाई राहत सामाग्री
वडामा कम्तिमा १० बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने
१. प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँग छलफल
२. लकडाउनको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्न मन्त्री भट्टसँग छलफल
३. सरकारको ध्यान केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित : सांसद चौधरी
४. सङ्क्रमित जिल्ला ६८ पुगे, एकै दिन ४३ को डिस्चार्ज
५. चन्द्रग्रहण नेपालबाट देखिँदैन : पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति
६. युएईबाट १६८ स्वदेश फिर्ता (तस्विरहरू)